Af soomaaliga :- marxalada maanta iyo jiritaankiisa mustaqbal. Waxa qorey khaalid Bulshaawi
Sunday February 03, 2019 - 09:36:52 in Maqaallo by
Marxalado kala duwan iyo dadaalo is Xigay oo muddo dheer soo socday Ugu danbayn sanadkii 1972 kii ayay dawladii soomaaliyeed shaacisay hadal aad loogu farxay oo ahaa in guud ahaan qoomiyada Soomaaliyeed ay yeelan doonaan Afka ay ku hadlaan oo qoran ama Leh Tixraac xuruufeed kaas oo Fududaynaya waxbarashada Islamarkaana xoojinaya aqoonta iyo Akhriska soomaalida maadaama Xiligaas wixii ka horeeyay ay Soomaalidu ahayd bulsho afkooda ku Hadasha balse aan lahayn wax Qoraal ah.
Dawladii kacaanka ayaa dedaal Badan ku bixisay horumarinta af Soomaaliga iyagoo isku dayay in uu La mid noqdo afafka kale ee dunida Waxaana ay dad badani xusuusan Yihiin ololihii qorista iyo akhrinta af Soomaaliga.
Hase yeeshee burburkii soo gaadhay Qarankii iyo dawladii soomaaliyeed Ayaa dhibaato dhinacyo badan ah u Horseeday qoomiyada soomaalida Waxaana afka soomaaligu uu kamid Uahay dhibanayaasha ay Dhibaatadaasi saamaysay.
Laakiin khuburo kamida Aqoonyahanada ku xeeldheer Culuumta luuqadaha ee soomalida ah Ayaa sheegay in marxalad aad u Hoosaysa uu marayo af soomaaligu Isla markaana walaac iyo werwer Laga qabo jiritaankiisa mustaqbal.
Dedaalo badan iyo daraasado door ah Ayaa lagu gorfeeyay dajinta naxwaha Afka soomaaliga sida Magac, fal, Fal-kaab, Magac u yaal, Sifo, hadana Sidaasi oo ay tahay wali naxwaha iyo Erayaduba waa qabyo.
Qarnigan (21 - aad ) oo isdhexgalka Dunida iyo bulshooyinku ay meel sare marayso maadaama tiknoolajiyada Iyo aaladaha casriga ah ee caalamka kusoo kordhay ay fududeeyeen in dadyoowga caalamka oo dhan ay hal Meel ku wada xidhiidhi karaan ama Iska arki karaan amase ay ka wada Hadli karaan.
Loolanka wajiyada badan iyo tartanka ka dhaxeeya dalalka dunida waxa kamid ah fidinta iyo balaadhinta luuqadahooda inkasta oo cilmiga iyo aqoontu ay qofkasta muhiim u tahay hadana waxa xusid mudan in la kala saaro oo aan la isku qaldin macnayaasha aqoonta iyo afka ama luuqada.
Sida aynu ognahay aqoontu waa mid guud oo ka dhaxaysa umadaha aduunyada ku nool mana jirto cid gaar u sheegata lahaanshaheeda balse luuqada ama afka hooyo waa astaan iyo calaamad ka turjumaysa jiritaanka qoomiyadeed ee qayb kamida bulshooyinka dunida wadan kastaana wuxuu gaar u leeyahay luuqad u gaar ah.
Taariikhda iyo sooyaalka nololeed ee umadaha waxa lagu qeexaa ama ay qiimo ku leeyihiin luuqadooda,
Luuqadu waa jiritaanka asliga ah iyo sawraca tilmaameed ee qoomiyadaha dunida.
Markasta oo bulshadu yaraso adeegsiga afkaartooda ama ka qayb qaadashada harumarinta iyo kobcinta waa Astaamaha lagu garto burburka luuqada iyo calaamadaha ugu danbayn sababa in luuqadaasi ay ka baxdo khariirada luuqadaha dunida.
Hadaba aqoonyahano badan ayaa ka walaacsan sii jiritaanka luuqadeena maadaama oo xukumadaha,ganacsatada iyo dhalinyarada dambe ayna xooga saarin ama dedaal badan ku bixinin luuqada af soomaaliga.
Ka qayb qaado horumarinta iyo hiilka hantidaada iyo hantida qoomiyadaada oo ah afkaaga hooyo jiritaankiisa.
Waxa qorey khaalid abdi muhumed ( Bulshaawi)
On Thu, Dec 27, 2018, 2:52 PM Khaalid Bulshaawi <khaalid.bulshaawi24@gmail.comwrote:
Noole kasta oo dunida ku nool waxa aasaas iyo saldhig u ah taariikh iyo isir abuuritaankiisu kasoo bilowdo waana xikmad dabiici ah oo ilaahay swt ugu talo galay.
Dadyoowga iyo Qoomiyadaha dunida ee qaaradaha kala durugsan ku kala nool midkasta waxa uu hanti ahaan u leeyahay sawrac iyo taariikh ay noloshoodu kasoo bilaabantay, tusaale ahaan soomaalida oo kamida qoomiyadaha ku nool qaarada afrika waxay leedahay tilmaamo iyo taariikho nololeed oo markasta la jaan-qaadayay isbadalada xadaarada nolosha iyo xidhiidhka dunida.
Waa mawduuc aad u mug weyn oo aan suurto gal ahayn in qoraalkeygan aan kusoo koobo balse waxaan idinla wadaagayaa Qodob kamida ah taariikhda qoomiyada soomaalida oo ah " Meeqaamkii ay soomaalidii hore ka mudnaayeen qoomiyadaha kale iyo qaabkii ay ula macaamili jireen "
Xaqiiqo ahaan qof kasta wuu og yahay dhaawaca weyn ee gaadhay sharaftii soomaalinimo iyo aragtidii ay umadaha kale ka aaminsanaayeen qofka soomaaliga ah xilligan aynu joogno taas oo ay sababeen dhibaatooyin la inoosoo dhoofiyay oo lagu cidhib tirayo ama lagu wiiqayo jiritaankeena umadeed, diinteena,
akhlaaqdeena iyo hab-qadhanka wanaagsan ee bani-aadamnimo,
Hadaba soomaalidu waayadii hore waxay ahaayeen dad qiimo leh oo dadnimadooda iyo jiritaankooda aad u ilaashada kana fikira oo odorasa danta guud iyo ilaalinta amuuraha aasaasiga ah, ganacsiga iyo xadaarada dunidana baal dahab ah ayay kaga jireen taasoo sababtay in qadarin iyo qiimayn gaar ah ay yeeshaan oo dadyoowga kale ee geeska afrika ay ka sareeyaan.
Maalin aan sii fogeyn ayaanu masjid kuwada tukanay nin oday ah oo ganacsade ah oo u dhashay dalka cumaan.
Markii uu na arkey ayuu na weydiiyay inaanu soomaali nahay, markii aanu u jawaabney ee u sheegnay inaanu soomaali nahay ayuu nooga waramay taariikh iyo dhacdooyin cajiib ah oo uu soomaalida kala soo kulmay waxaanu nala wadaagey inta uu ka yaqaanay habdhaqankii soomaalida maadama uu dhowr jeer hawlo ganacsi u tagay dhulalka soomaalidu degto sida uu noo sheegay.
Wuxuu ii sheegay in soomaalidu ay ahaayeen dad aad u ixtiraam badan oo aad isu jecel, waxa kale oo uu soomaalidii wakhtigaas ku sifeeyay dad aamin ah oo aan khiyaamada iyo beenta aqoonin isla markaana aad u ixtiraama heshiisyada ganacsi ee ay dadyoowga kale la lahaayeen.
Ugu danbeyn waxaan xasuusinayaa qof kasta oo soomali ah inuu masuul ka yahay ilaalinta sharafta iyo jiritaanka umadiisa isla markaana uu ka turjumayo ama uu astaan u yahay akhlaaqda iyo sifooyinka laga tilmaansan soomaalida oo idil.
Waxa qorey khalid abdi muhumed
Makkah al mukkarammah